बुटवलका मेयरलाई मुक्का हान्ने व्यक्ति ५ हजार धरौटीमा रिहा
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख (मेयर) शिवराज सुवेदीलाई पहिरो निरीक्षणका क्रममा मुक्का प्रहार गर्ने युवक गणेश पंगेनी १ हप्तापछि धरौटीमा छुटेका छन् ।
पंगेनीलाई अमर्यादित व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो । उनले असोज ४ गते मेयरमाथि मुक्का हानेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले उनलाई सोमवार उनी ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ । रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट पेश हुन आएको अमर्यादित व्यवहारको मुद्दा हेरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ऋषिराम तिवारीले धरौटीमा छाडेको जानकारी दिए । ५ हजार धरौटी राखेर तारेखमा छाडिएको पौडेलले बताए ।
प्रहरीले पंगेनीलाई असोज ४ गते साँझ नै पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । तर पालिकाले पंगेनीमाथि मुद्दा नचलाउन भनेको बताइएको थियो ।
प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी अमर्यादित व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा बनाई जिल्ला प्रशासनमा पेश गरेको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी मदन कुँवरले घटनाको प्रकृति हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा पेश गरिएको बताए ।
‘हामीले केही दिन राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा पठाएका थियौं । त्यहाँबाट धरौटीमा रिहा गरिएको छ,’ उनले भने । पहिरोले बुटवल–३ ज्योतिनगरमा २० घर पुरिएका छन् ।
बनिबनाउ घरको नाममा केही साथी दास बन्दैछन् : मन्त्री...
रुपन्देही आउँदै गृहमन्त्री खाण
संविधान संशोधन नभएसम्म सबै नेपालीको हित हुँदैन :...
विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न ग...
कस्तो ठाउँमा हुर्कियो यो वरको रुख ? (भिडियो)
सामान्य फेरीलाई विलासी डुंगा बनाए यी व्यक्तिले, मूल्य करोडौंमा
पाँच हजार वर्ष पुरानो मानव खप्परमा भेटियो प्लेग !
दुबईमा उखुम गर्मी भएपछि ड्रोनले बादलमा विद्युतीय झड्का दिएर पानी पार्दै वैज्ञानिकहरू (भिडियो)
नुहाउँदा पनि च्याट गर्न छोडेनन् यी व्यक्तिले !
वैज्ञानिकहरूले कागती र सुन्तलाबाट बनाए पारदर्शी काठ